Public health Concern स्वास्थ्य जीवन शैली – Public health Concern
मोटरसाइकल दुर्घटनाबाट बच्न के गर्ने ? कस्ता उपायहरु अपनाउने ?
सजिलो, सस्तो र छिटो हुने भएकाले मोटरसाइकल लोकप्रिय यातायातको साधनमा पर्छ । ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको आँकडाअनुसार काठमाण्डौमा मात्रै १० लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल गुड्छन् । यात्रा गर्न सहज भए पनि मोटरसाइकल...